ရန်ကုန်သင်္ကြန် ဗုံးပေါက်ကွဲမူအပေါ် စစ်အစိုးရ၏ မတရား
စွပ်စွဲမူ အပေါ် ရန်ကုန်ရှိ ပြည်သူများမှ ပေးပို့သော E-Mail
& တခုခုတော့ မှားနေပြီဗျ။ .........
ခင်ရီကပြောတော့ လူကြားထဲ ဗုံးကို ပစ်သွင်းတယ်တဲ့ ။ ဗုံးပစ်တဲ့သူက သင်္ကြန်မှာ onduty နဲ့ သူ့ အလုပ်ထဲမှာ ။
မျက်မြင်သက်သေ (အလီဘိုင်ပြစရာ)တွေ လည်းရှိတယ်။
မူဆလင်အကြမ်းဖက်..ဘာညာပြောချင်လို့ ခေတ်မှီအောင် တမင် မူဆလင် ပညာ တတ် အင်ဂျင်နီယာကို တမင်ဆွဲပြ တာလား. ဒါမှ လည်း အယ်ကိုင်ဒါ ဘာညာ..စွပ်စွဲရတာ လွယ်မယ် ။
ကမ္ဘာပေါ် အစ္စလာမ် ပညာတတ်တွေ ဗုံးခွဲနေတာကြောင့် တရားခံ မပေါ်ပေါ်အောင် ဖော်ရမဲ့ခင်ရီက. မူလဆင် ပညာတတ် အင်ဂျင်နီယာပါ ဆိုပြီး.ရမ်းဖြီးချတာပေါ့ဗျာ။
ခါတိုင်းဗုံးခွဲတဲ့ သူတွေက အခုလို အဆင့်မြင့်မြင့် ပိပိရိရိ..စစ်တပ်က well train တွေလို ဖောက်မှ မဖောက်တတ် တာ ကိုး ခင်ဗျ...
မဲဆောက်ဘက်က ပြန်ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ စွမ်းအားမြှင့် ဘာညာ စွပ်စွဲခံရတဲ့သူတွေ ဖောက်တာကလည်း..မတတ်ဘဲ မိမိ ဖာသာ ပေါက်သေတာ တွေများတော့..
ဒီလို အဆင့်မြင့် လူသေအောင်ဖောက်နိုင်တဲ့အမှုကျ..တော်ရုံလူလုပ်နိုင်ဖို့ မလွယ်တာ...သူတို့ ဖာသာသူတို့ လည်းသိပါရဲ့
အခုဘဲ အယ်ကိုင်ဒါ ဖြစ်လိုက်...အခုဘဲ စွမ်းအားမြှင့်ပြောလိုက်။
ပါးစပ်ထဲတော်ရာပြောနေတာ..အခုတော့ ဘာမှလည်းမလုပ်..သူ့ အလုပ်သူလုပ်နေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာကို မူဆလင်ဘာသာကိုးကွယ်တာနဲ့ 
တမင်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်စွပ်စွဲဖို့တမင်ချကြွေးနေတယ်။
မျက်မြင်သက်သေ က ကိုဖြိုးဝေအောင် ပစ်သွင်းတဲ့ဗုံးမြင်တယ်ဆိုတော့..
ဒီအင်ဂျင်နီယာက..ဆူပါမင်းဗျ..ဇော်ဂျီဖိုဝင်သားစားထားတဲ့ ကိုဗျတ်ဝိမှတ်တယ်။ မြေသျှိုးမိုးပျံ ကိုယ်ဖျောက်ပြီး အလုပ်ကနေ
ဗုံးပေါက်တဲ့နေရာရောက်သွားသကိုးဗျ..ကိုခင်ရီခမြာ ဒီ ကိုဗျတ်ဝိကို ဘုန်းနိုမ့်အောင် မီးနေထမီ လည်ရှာနေတယ်တယ်ဗျ..
ဒါးနဲ့ ထိုး ဒါးက ကျိူး လှံနဲ့ ထိုး လှံခွေလို့ တဲ့..တော်ကြာ သောက်ရူး ဘုရင်ရူးက ဒီလူ့ အသားဇော်ဂျီဖိုဝင်သားဆိုပြီး..အ၀ှါဖြတ်ပြီး
ကင်စားနေပါဦးမယ်..သူ ကလည်း မကြီးမကျယ် ဆူပါမင်းရူးလေ.အော်...အရူးတွေဘုံမြောက်နေတဲ့ ကျုပ် တို့တိုင်းပြည်..၀မ်းနည်းစရာတော့
ုပြီးတော့လည်း..အံမယ်မင်း..သောက်ကျိုးနည်းလောက်အောင်တော်ပါတဲ့ ဂျိမ်းစဘွန်း ဂျွမ်းစဘိန်း ခင်ရီ..(ဘဘရေ..ကိုဗျတ်ဝိ ကို
အနော်..ဖမ်းထားဘီတဲ့) ခွိခွိ..ကြည့်လည်းယုံပါ အရပ်ကတို့ ခင်ဗျား..
စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များမှ သင်္ကြန်ရက် ဗုံးခွဲမှုတွင် လုံခြုံရေးများအား စောင့် ကြည့်တာဝန် ယူခဲ့သူ ဟု မတရားစွပ်စွဲခံထား ရသောကိုဖြိုးဝေအောင်၏ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း ....
အမည် - ကိုဖြိုးဝေအောင်
အခြားအမည် - မိုဟာမက်ယှာဗန်
အဘအမည် - ဦးဆန်းဝင်းဦး
အမိအမည် - ဒေါ်မာမာဆွေ
မွေးသက္ကရာဇ် - (၈)ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၉၇၉ ခုနှစ်
လူမျိုး - ကုလား-ဗမာကပြား
ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ - အစ္စလာမ်ဘာသာ
မှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၁၂/သဃက(နိုင်) - - - - - - - - - -
ပညာအရည်အချင်း - အေဂျီတီအိုင် (လျှပ်စစ်စွမ်းအား)
ဖမ်းဆီးခံရစဉ် နေထိုင်သည့် လိပ်စာ - အမှတ် (၂၇)၊ ၃-လွှာ၊ (၅၅) လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ကိုဖြိုးဝေအောင်သည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ မယ်ဇလီကုန်းကျေးရွာ ဇာတိဖြစ်ပြီး မွေးချင်း ညီအစ်ကို (၃) ယောက်တွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။ လူချမ်းသာများဟု မဆိုသာသည့်တိုင် ပြည့်စုံသော မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ မွေးဖွားလာသူတဦးဖြစ်သလို ညီအစ်ကို (၃) ယောက်စလုံးလည်း ပညာတတ် များဖြစ်ကြပါသည်။ ညီဖြစ်သူ ထက်ဝေအောင်ဆိုလျှင်
ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဖြိုးဝေအောင်သည် တောင်ကြီးမြို့ အေးသာယာ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအား(EP) ဘာသာရပ်ဖြင့်
အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့အတူရရှိခဲ့သည့် မဌေးဌေး (AGTI-EP) နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖမ်းဆီးခံရချိန်တွင် သမီးတယောက်၊ သားတယောက်ရှိပါသည်။
ဆာကူရာ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ ချယ်ရီဥယျာဉ်အိမ်ယာစီမံကိန်း (တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်) တွင် တာဝန် ခံ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ အဖြစ်
လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ခပေါင်းရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်း၊ ရဲရွာရေအားလျှပ် စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်း ၊ ကျိုင်းတောင်းရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်း ၊ ကွန်းချောင်း ရေအားလျှပ် စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတို့တွင် တာဝါကရိန်းတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ “ELTRON” Engineering Group အမည်ဖြင့် လျှပ်စစ် သွယ်တန်း ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ကိုပါ ကန်ထရိုက်ယူလက်ခံခြင်း စသော (ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း) များကို သူ ငယ်ချင်းများနှင့် အကျိုးတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခု၊ ဧပြီလ (၁၃) ရက်နေ့မှစ၍ ရန်ကင်းစင်တာတွင် သံပန်းလုပ်ငန်းများ၊ ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းများကို ကန် ထရိုက်အတူ လုပ်ဖော်ဖြစ် သော
ကိုမျိုးမြင့်အောင် ခေါ် ကိုမျိုးကြီး(BE-Civil) နှင့် နေ့/ညလုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါသည်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သော သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ဧပြီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ချိန်သာမက တနေ့လုံး တချိန်လုံး ရန်ကင်းစင်တာတွင် ရှိနေသည်ကို ကိုမျိုးကြီး (BE-Civil) နှင့် အလုပ် သမားများ၊ ရန်ကင်းစင်တာမှ ၀န်ထမ်းများနှင့် လုံခြုံရေးများ အားလုံးသိရှိကြပါသည်။
ကိုဖြိုးဝေအောင်သည် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အစွန်းရောက် မဟုတ်ပါ။ ၂၀၀၇ခုနှစ်က ဆာကူရာ ဆောက်လုပ်ရေးမှ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ငွေကြာရံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်သို့ ထ ရန်စဖော်မာ လှူဒါန်းရာ ငွေကြာရံကျောင်းဝန်းအ တွင်း တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ် ကိုဖြိုးဝေအောင် ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သံဃာတော်များနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ ကျောင်းဝန်းအတွင်း နေထိုင်သွားလာ ခြင်းတို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဓလေ့ ထုံးစံနှင့်အညီ ပြုမူခဲ့ပါသည်။ အများနှင့် လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်သူဖြစ်ပြီး
(ဆေးလိပ်/ကွမ်း/အရက်များ သောက်စားခြင်းမရှိ) အနေအေးသူ တယောက် လည်းဖြစ်ပါသည်။ ပရဟိတလုပ် ငန်များ၊ အလှူအတန်းများတွင်အားတက် သရော ပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီး ဇာတိ မယ်ဇလီ ကုန်းရှိ (ဗိုလ်အောင်ကျော်) စာကြည့်တိုက်၏ လိုအပ်ချက်များအား နိုင်သလောက် ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းနေသူတ ယောက်ဖြစ်ပါသည်။
အများပြည်သူကြားတွင် စစ်ဆေးခံပိုင်ခွင့်မရှိ၊ သက်သေပြ ဖြေရှင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ စစ်အစိုးရ၏ တဖက်သတ်စွပ် စွဲမှုဖြင့် မတရားဖမ်းဆီးခံ အကျဉ်းကျ နေရသည့် ကိုဖြိုးဝေအောင်ကဲ့သို့သော ပြည်သူပြည်သားများ၊ ကျောင်း သားလူငယ်များ၊ ရဟန်းသံဃာများ၊မြန်မာပြည်အကျဉ်းထောင်များတွင် မနည်းတော့ပြီ ဆိုသည်ကို ...။ ။
post copy from myanmar muslim net
Posted by mbma at Tuesday, May 18, 2010 No comments:
ရန်ကုန်သင်္ကြန် ဗုံးပေါက်ကွဲမူအပေါ် စစ်အစိုးရ၏ မတရား...